Dacwadda Badda ee Soomaaliya iyo Kenya: Maxaad ka taqaannaa qareennada Soomaaliya ku matalaya dacwadda badda ee ICJ? - BBC News Somali
Dacwadda Badda ee Soomaaliya iyo Kenya: Maxaad ka taqaannaa qareennada Soomaaliya ku matalaya dacwadda badda ee ICJ?
Xarunta maxkamadda ICJ ee magaalada Hague
Xigashada Sawirka, RFA video screenshot
Gar yaqaan Paul S Reichler
Gar yaqaan Prof. Philippe Sands
Prof. Philippe Sands, oo ay da'diisu tahay 60 sano waa qareen British-French ah oo ka tirsan garyaqaannada caanka ah ee dunida.
Gar yaqaan Prof. Alain Pellet
Mr Pellet ayaa waxaa uu culuumta sharciga ka bartay Jaamacad ku taalla magaalada Paris oo lagu magacaabo de Paris Ouest - Nanterre La Défense,.
Xigashada Sawirka, Alina Miron/Twitter
Garyaqaan Alina Miron
Xigashada Sawirka, matrixlaw
Gar yaqaan Edward Craven
Mr Craven - oo u dhashay dalka Ingiriiska - waa qareen caalami ah oo ku takhasusay noocyada kala duwan ee shuruucda caalamiga ah .
FBI-da oo go'aan hor leh ka soo saartay haweeney lacag badan la goosatay
Wiil webi ku dhinay isagoo isku dayaya badbaadinta saaxiibtiis oo hafaneysa